शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्नः डुवान समस्याबारे भारतसँग कुरा गर्नु पर्दैन ? | Ekhabar Nepal
शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्नः डुवान समस्याबारे भारतसँग कुरा गर्नु पर्दैन ?
राजनीति भाद्र ४ २०७४ Rekha Rana
राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर बाढी पहिरो प्रभावितको उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनको उचित प्रवन्ध मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेकी छन् । साथै प्राकृतिक विपदको रोकथाम र पूर्वतयारी गर्नु पर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
उनले डुवान समस्याबारे भारतसँग कुरा गर्नु पर्ने र चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
भण्डारीले ‘बाढी आउँछ, जनताले दुःख पाउँछन्, अनि जति सकिन्छ राहत बाँढेर बस्ने ? भन्दै नेताहरुलाई प्रश्न गरिन्, ‘डुवान समस्याबारे भारतसँग कुरा गर्नु पर्दैन ?
राष्ट्रपति चण्डारीले साझा परराष्ट्र नीति निर्माण गर्न समेत दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । साथै संविधान संशोधनबारे पनि संविधान निर्माणकर्ता प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा बसेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डुवानबारे भारतसँग कुरा गर्ने भनेका थिए । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले भने राष्ट्रियताको कुरा गर्दा खोक्रो राष्ट्रियता भन्ने सत्तारुढ दलहरुसँग के कुरा गर्नु भनेका छन् ।